Phila ngokothando e-Kaub ngqo e-Rhine
Kaub, Rheinland-Pfalz, i-Germany
etholakala e-Kaub futhi inikeza amabhayisikili amahhala nezindawo zokosa inyama. Indawo yokuhlala ingamakhilomitha angama-47 ukusuka e-Mainz, futhi izivakashi ziyazuza endaweni yokupaka yangasese etholakala esizeni kanye ne-WiFi yamahhala.
Uma ungathanda ukuthola indawo, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili nokudoba kuyenzeka endaweni ezungezile.
IWiesbaden iqhele ngamakhilomitha angama-43 ukusuka efulethini, kanti iKoblenz iqhele ngamakhilomitha angama-38. Isikhumulo sezindiza esiseduze yiFrankfurt-Hahn Airport, amakhilomitha angama-52 ukusuka eRomantisch wohnen eKaub direkt am Rhein.
Ifulethi lihlome ngokuphelele. Inamakamelo okulala angu-2, i-TV enesikrini esiyisicaba esine-Amazon-Fire-TV, ikhishi elihlonyelwe elinomshini wokuwasha izitsha, iSenseo Coffee maker kanye nemicrowave, umshini wokuwasha, kanye negumbi lokugezela elilodwa elineshawa.
4.58(24 okushiwo abanye)
Ingadi kabhiya, ibha yewayini yase-rustic, isiteshi sesitimela, inqaba yesiqhingi sase-Pfalzgrafenstein, i-Blüchermuseum, umzila wokuqwala izintaba e-Rheinsteig, isikebhe sase-Rhine, isiteshi sesitimela, i-Middle Rhine rafting,
Indlu itholakala ngqo ngaphansi kweGutenfels Castle. Uma ukhuphukela lapho uzofinyelela umzila odumile wezintaba i-Rheinsteig.
I-Kaub iyindawo ekahle yokuqala yokuhamba ngezinyawo ngosuku e-Rheinsteig, e-Rhein-Burgenweg noma e-Sauerthal noma e-Wispertal.
Gijima isiteji sosuku bese ubuya nomkhumbi wolayini noma isitimela sesifunda.
Amabhayisikili angu-2 atholakala mahhala okuvakasha okukhululekile ngaphandle kwemithambeka nhlangothi zombili ye-Rhine ukuya e-Boppard, Bacharach, Oberwesel noma Sankt Goarshausen nase-Lorch.
noma nini ocingweni
Hlola ezinye izinketho ezise- Kaub namaphethelo